Uthembisa abalandeli bakhe umculo omnandi | News24
Uthembisa abalandeli bakhe umculo omnandi
Umculi we-gospel uMnuz Athenkosi Hlongwa uthembisa abalandeli bakhe i-DVD emnandi Kanye nolozolo we-album elindeleke ukuphuma ngonyaka ozayo. ISITHOMBE: MAKHOSANDILE ZULU
UMCULI we-gospel uMnuz Athenkosi Hlongwa uthe kuyintokozo kuyena ukuthi uze wakwazi ukufeza iphupho lakhe lokuthi aqede ukwenza i-DVD yakhe.
Uthe: “Umsebenzi wale DVD uqale enyangeni uNcwaba [August] kuwona lonyaka, size saqeda kuqala inyanga uLwezi [November],” kusho uMnuz Hlongwa.
Uqhube wathi ubonga umusa namandla kaNkulunkulu ngoba ubengeke alifeze leli phupho ngamandla akhe kuphela.
UMnuz Hlongwa uthe: “Umsebenzi wokwenza le DVD ubunzima kakhulu kodwa ngenxa kaNkulunkulu iphupho lami lifezekile. Ngiyazi ukuthi abalandeli bami kudala beyilindele le DVD,” kusho yena.
Eqhuba, uthe enye yezingoma etholakala kule DVD isihloko sayo esithi: ‘Wazibonakalisa’ ingubufakazi bendlela uNkulunkulu abe naye ngenkathi enza le DVD.
Uthe ubonga nemithandazo yabantu akhonza nabo, abefundisi kanye nabalandeli bakhe.
Uthe: “Ngithanda nokubonga bonke abantu abangisingathe ngemithandazo ngoba iyona enginikeze amandla okuthi ngiqhubekele phambili,” kusho uMnuz Hlongwa.
Uqhube wathi imali yokwenza le DVD ibivela ephaketheni lakhe kanti futhi kukhona nabanye abantu abasondelene naye abekade bemulekelela.
Uthe ukhethe ukuthi le DVD yenzelwe KwaDukuza ngoba indawo ahlala kuyona futhi yikhona lapho okugcwele abalandeli bakhe.
Uqhube wathi esinye isizathu sokuthi akhethe ukuthi ayenzele laKwaDukuza i-DVD yakhe ukuthi ubefuna ukuthi kubonakale ukuthi indawo yaKwaDukuza indawo enhle.
UMnuz Hlongwa uthe: “Bengifuna ukuthi umphakathi ubone ukuthi indawo yaKwaDukuza indawo enhle. Futhi bengifuna ukuthi abalandeli bami bezizwe beyingxenye yale DVD njengoba iningi labo lihlala khona la,” kusho yena.
Uqhube wathi isizathu sokuthi akhethe ukwenza i-DVD ukuthi ubefisa ukuthi abalandeli bakhe bezibonele into esuka ngaphakathi kuyena.
Uthe: “Umculo wami ngiyazibhalela, onke amaculo ami akhuluma ngento esuka ngaphakathi kumina, yingakho ngathatha isinqumo sokwenza le DVD ngoba bengifisa ukuthi abalandeli bami bebone lento esuka ngaphakathi kimina,” kusho uMnuz Hlongwa.
Uthe usebenzisane noMnuz Vusi Mthembu ohlanganise i-DVD kanye nabaculi uMnuz Dumisani Hlombe, uMnuz Zamokwakhe Mkhize, uNksz Khanyi Msane, uNksz Thuli Mthethwa kanye noNksz Mabongi Gumede.
UMnuz Hlongwa uthe: “Ngithanda ukubonga bonke abantu engisebenzisane nabo kule DVD. Ngifisa nokubonga uMfundisi Eugene Mathonsi ongisize kakhulu ngoba enye yezingoma etholakala kule DVD yenzelwa esontweni lakhe,” kusho yena.
Uqhube wathi i-DVD yakhe itholakala kuyena okwa manje. Ungaxhumana naye uMnuz Hlongwa enobolweni ethi 081 899 2784 noma uye kwa-Morkels, KwaDukuza edolobheni. Ibiza imali engu-R90.
Uthe ufisa ukubonga abalandeli bakhe ngoba ngaphandle kwabo ngabe umculo wakhe awusiyona impumelelo. Uqhube ngokubonga abantu asebenza nabo kwa-BMA Group abachaze njengo mndeni.
Uthe: “Abalandeli bami ngibathembisa ulozolo we-album entsha engiphezukwayo njenga manje. Kulindeleke ukuthi izophuma ngonyaka ozayo,” kusho yena.